ptd content | Ministry of Communications And Information Technology
Mobile APPLICATION FORM FOR RADIOCOMMUNICATION
APPARATUS LICENSE(Applicant Form)
Fixed APPLICATION FORM FOR RADIOCOMMUNICATION
Note:Fill all items clearly according below explanations please Read more
အစိုးရဌာန / လုပ်ငန်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ ဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းများပြည်ပမှ တင်သွင်းသုံးစွဲရာတွင်ဆက်သွယ်ရေးမူဝါဒဆိုင်ရာ
ကြီးကြပ်မှုလုပ်ငန်းကော်မတီ သို့ တင်ပြ၍ သဘောတူ ခွင့်ပြုချက် ရယူရပါမည်။ ဆက်သွယ်ရေးမူဝါဒဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်မှု လုပ်ငန်းကော်မတီ အစည်းအ‌ဝေး၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ တင်သွင်းခွင့် ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးပါသည်။ ယခုအ
Brief ဌာနအဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ၀န်ထမ်းအင်အား
ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်စဉ် မူလဖွဲ့စည်းပုံ အရ အဆင့်(၃)ဦးစီးဌာနဖြစ်ပြီး ခွင့်ပြုအင်အားမှာအရာထမ်း
(၉) ဦး ၊ အမှုထမ်း (၄၀) ဦး စုစုပေါင်း (၄၉) ဦး ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ပြောင်းလဲတိုးတက်လာသော ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာများအား ဥပ ဒေ နှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်နိုင်ရန်အတွက် အဆင့်(၃) ဦးစီး ဌာနမှ အဆင့် (၂) ဦးစီးဌာနသို့ တိုးချဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်လာသ
Division Read more
MISE or others The State Law and order Restoration Council
The State-owned Economic Enterprises Law
(The State Law and Order Restoration Council Law No.9/89)
The 10th Waning Day of Tabaung, 1350 M.E
(31st March, 1989)
The State Law and Order Restoration Council hereby enacts the following Law.
1. This Law shall be called the State-owned Economic Enterprises Law.
International Relation International Relation
ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကို ဖွဲ့စည်းရခြင်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ အောက်ပါအဓိက တာဝန် များကိုဆက်သွယ်ရေး နှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန ကိုယ်စား ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်ပါသည်။-
(က) စာပို့တိုက်လုပ်ငန်း၊ တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတို့ကို ဥပဒေဖြင့် ကြီးကြပ်ခြင်း။
Radio Division ရေဒီယိုဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
(က) ကြိုးမဲ့ရေဒီယို ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဥပဒေနှင့်အညီ ကြီးကြပ်ခြင်း။
(ခ) ရေဒီယို ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေနည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း
စသည်များကို လိုအပ်လျှင် ပြင်ဆင်ခြင်း ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ အသစ်ရေးဆွဲခြင်း။